Mourinho oo qorsheynaya inuu dalab ka gudbiyo mid ka mid ah daafacyada ugu muhiimsan ee kooxda Barcelona – Gool FM
Dajiye July 25, 2021
(Roma) 25 Luulyo 2021. Sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska “Sport” ee dalka Spain, Kooxda kubadda cagta Roma ayaa dalab ka gudbisay daafaca Barcelona ee Clément Lenglet, kaddib markii uu codsigaas soo jeediyay tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho.
Clément Lenglet ayaa heysta kalsoonida tababare Ronald Koeman, isaga oo doonaya inuu ku tiirsanaado awoodiisa ciyaareed xilli ciyaareedka soo aadan, laakiin maamulka Barcelona ayaa wax dhibaato ah ku qabin fikirka ah inay iska iibiyaan daafaca reer France xagaagan, marka loo fiiriyo dhibaatada dhaqaale ee kooxda heysata.
Jose Mourinho ayaa doonaya inuu xoojiyo safka daafaca ee kooxda AS Roma isaga oo doonaya inuu la saxiixdo Clément Lenglet, wuxuuna ku wargaliyay maamulka inay ka gudbiyaan dalab rasmi ah si ay uga dhaadhiciyaan Barcelona inay iska fasaxaan ciyaaryahanka.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in AS Roma ay u soo bandhigtay kooxda Barcelona adduun lacageed dhan 15 million euros, si ay ula saxiixato Lenglet, laakiin kooxda reer Catalonia ayaa diiday dalabkan, sababa la xiriira inay aaminsan tahay in qiimaha ugu macquulsan ay ku iibin karto ciyaaryahanka uu yahay 25 million euros.
Dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in Clément Lenglet uusan soo dhaweynaynin fikirka ah inuu ku biiryo kooxda Roma, maadaama uu doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Premier League haddii uu ka tagayo Barcelona, xilli uu xiiso ka helayo sidoo kale kooxaha reer England ee West Ham iyo Everton.